Ji kpachie oghere ntupu - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
ji kpachie oghere ntupu
Kwesịrị ekwesị Materials ji kpachie oghere arụpụtara site carbon ígwè, aluminum, igwe anaghị agba nchara, na pụrụ iche alloys enye nchebe, ọtọ, inogide ngwaahịa niile gburugburu. The uru, kpọmkwem ngwa na atụmatụ nke e ji kpachie oghere ntupu: Steel ji kpachie oghere awade ndị na-esonụ uru tụnyere ígwè okporo Ibé akwụkwọ: Steel ji kpachie oghere nwere ìhè arọ, ezi ike, nnukwu ebu ikike na ike ịzọpụta ihe na-eri. Ọ na-enye ezi ventilashion nke ìhè na ifufe, a oge a na uche, ị gwara ...
FOB Price: US $ 10 - 200 / Ibe
Min.Order ibu: 5 ton / Tọn
Tụkwasịnụ Ikike: 400 ton / Tọn kwa Week
Kwesịrị ekwesị Materials
ji kpachie oghere arụpụtara site carbon ígwè, aluminum, igwe anaghị agba nchara, na pụrụ iche alloys enye nchebe, ọtọ, inogide ngwaahịa niile gburugburu.
The uru, kpọmkwem ngwa na atụmatụ nke e ji kpachie oghere ntupu:
Steel ji kpachie oghere awade ndị na-esonụ uru tụnyere ígwè okporo Ibé akwụkwọ:
Steel ji kpachie oghere nwere ìhè arọ, ezi ike, nnukwu ebu ikike na ike ịzọpụta ihe na-eri. Ọ na-enye ezi ventilashion nke ìhè na ifufe, a oge a na uche, ị gwara ọdịdị na mgbochi skid nchekwa. Ọ dịkwa mfe ọcha, mfe iji wụnye na inogide maka ojiji.
Ji kpachie oghere ntupu ngwaahịa na-e na arụpụtara maka dị iche iche ulo oru na obodo rụrụ na obodo n'okporo ụzọ, ubi, yad, ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè na ulo oru engineering, na ha na-enye ndị na-esonụ atụmatụ:
* Aesthetic udidi: Simple edoghi na silver anya nzukọ nke oge a na-emekarị.
* The kacha mma drainage: leakage ebe nke 83,3 percent, ihe karịa ugboro abụọ nke nkedo ígwè ngwaahịa.
* Hot-mikpuo galvanized ọgwụgwọ: Good nchara na-àmà onwunwe, mmezi-free ndochi.
* Anti-ezu ohi imewe: The cover na eku bụ nkwonkwo na mgbabere uzo àjà nche, na nchekwa na-emeghe mma.
* Ego investments: Large-adịru. Naa efu maka ibu arọ tụnyere nkedo ígwè ngwaahịa. Cost pụrụ ịzọpụta maka ihe ize ndụ nke a na-zuru ma ọ bụ ndinuak onye ma ọ bụrụ na nkedo ígwè bụ ojiji.
* High ike: The ume na ike ya dị elu karịa nkedo ígwè. Ike ga-eji maka ọnụ, ọdụ na ndị ọzọ na nnukwu-adịru na arọ loading ọnọdụ.
Previous: Anụ Mmịkpọ Grịl netting
Osote: plastic netting
Conveyer echebe ntupu
Ji achọ ntupu
Igwe anaghị agba nchara Security ntupu